Nhau - Kuchengeta Uye Kugadzirisa Matipi EButterfly Valve
A shavishavi vharafu imhando yekuyerera inodzora chishandiso, inosanganisira diski inotenderera yekushandisa iyo mvura inoyerera muchiitiko ichi. Mune chinzvimbo chakamira chevharufuru vharuvhu, pane disimbi-yakavakirwa disc inoshandisa tekinoroji yekuvhara yemvura inoyerera. Kuvhara kwekuvhara kwevhavha iyi kwakanyatso fanika nekuvharwa kwekuvhara kwevhavha yebhora.
Inofananidzwa nebhairi rekuyangarara bhora, vharafu iyi ine zvinotevera:
Lightweight; saka hazvidi kutsigirwa zvakanyanya.
Inofananidzwa nemamwe mavharuvhu akafanana nemagadzirirwo akasiyana, mutengo wayo wakaderera.
Iyo vhevhuru vharuvhu yakavimbika uye inovhara-inovhara nzira mbiri vharuvhu, iyo inoshandiswa zvakanyanya mukudya, kuvaka ngarava, uye mamwe maindasitiri. Inofananidzwa nemamwe mavharuvhu, kumisikidzwa kwemavharufuru mavharuvhu inzira inodhura. Nekuvhara dhisiki, vharuvhu butterfly inogona zvakare kutora chikamu mukutungamira kuyerera nekuvhara iyo mvura / gasi.
Nzira yekugadzirisa nekuchengetedza mavharufuru mavharuvhu mumapombi akasiyana?
Aya anotevera matipi ekuchengetedza vharuvhu vharuvhu inogona kupihwa kwauri kune chako chirevo:
Butterfly mavharuvhu anoda kugara achigadziriswa uye kugadzirisa mushure mekushanda munzvimbo dzakasiyana dzekushanda kwenguva yakati. Kugadziridza kwese kunogona kuganhurwa kuita madiki ekugadzirisa, epakati kugadzirisa, uye inorema kugadzirisa.
Iyo chaiyo yekuongorora inoenderana nemamiriro ekunze epombi. Nekuti maindasitiri akasiyana anoda akasiyana ekugadzirisa uye ekugadzirisa maitiro, semuenzaniso, mune pombi yekuchengetedza petrochemical mabhizinesi, pombi yekumanikidza inofanirwa kuve yakaderera pane PN16MPa, uye yepakati tembiricha yakaderera kupfuura 550 ° C. Mamiriro akasiyana ekuchengetedza anodikanwa kune akasiyana epanyama uye emakemikari pombi yekufambisa midhiya.
Iyo diki yekugadzirisa maitiro eakasiyana mapaipi epepuruvhuru mavharuvhu, anosanganisira kuchenesa mabhu uye makapu emafuta, kutsiva o-zvindori, kuchenesa tambo uye vharuvhu madzinde, kubvisa marara muvharuvhu, kuomesa screws, uye kumisikidza mawoko mawoko. Zvese izvi zvinogona kushandiswa sekugadziriswa kwakarongwa. Kugadziridza kwepakati: kusanganisira zvidiki zvekugadzirisa zvinhu, kutsiva kwakachena zvikamu, kugadziridza muviri kwevhavha, sanding yezvisimbiso, vharuvhu kutwasuka, nezvimwe. Zvinhu izvi zvinogona kushandiswa kugadzirisa mufekitori. Kurema kwakakura: Yakasanganisirwa yepakati-yekugadzirisa chirongwa, kutsiva kwevharuvhu madzinde, kugadzirisa mabhureki, kutsiva kwematsime nezvisimbiso. Kana izvi zvichidikanwa, vharuvhu yeguruguru inokuvara zvakanyanya.
Kuti udzivise ngura uye kuzora mafuta, mavharuvha ebhatafuru anofanirwa kuchengetedzwa zvakanaka.
Pamusoro pevharuvhu, pane mafuta ekuzora anokodzera. Izvi zvinogona kutadza kucherechedzwa panosvika vharuvhu. Ita shuwa yekuzora mafuta kumutsipa wevhavha nguva nenguva kusvika girizi yakawandisa yabuda.
Mubhokisi regear, unogona kushandisa lithium-based grisi kuitira kugadzirisa.
Unogona kushandisa chero silicon-yakavakirwa chigadzirwa / girizi kuti uchenese nyore zvese zvikamu zvevhavha.
Kana usingaishandise kazhinji, ndapota edza kutenderera kana kuchovha bhotera vharuvhu kamwe chete pamwedzi.
Tiri shavishavi vharuvhu bhizimisi. Ndokumbirawo unzwe wakasununguka kuti utaure nesu kana uchifarira zvigadzirwa zvedu.
Post nguva: Chivabvu-14-2021